Nagu saabsan - Shijiazhuang damei kingmech pump Co., Ltd.
Damei Kingmech Pump Co., Ltd. waa shirkad xirfadlayaal ah oo soosaarida bamka Shiinaha ee matoorrada warshadaha. Iyadoo la raacayo mabda'a ah in la siiyo macaamiisha qalab tayo leh oo u baahan, shirkadeena waxay soo saartay noocyo hodan ah oo ah qalabka bamgareynta iyo qeybaha, sida bambooyin qulqulaya, bambooyin API 610, bambooyin kiimiko ah, bambooyin bullaacad ah, matoorrada mashiinka birlabta iyo bambooyin biyo nadiif ah. Dhammaan alaabooyinkan waxaa si ballaaran loogu dabbaqay macdanta, metallurgy, dhuxul-soo-saarka iyo wax soo saarka kiimikada, soo saarista korantada, bixinta biyaha iyo bullaacadaha bullaacadaha iyo daaweynta iyo wixii la mid ah tayadooda wanaagsan iyo waxqabadkooda aadka loogu kalsoon yahay ayaa ka caawiyey iyaga inay ku guuleystaan ​​aaminaad iyo ixtiraam macaamiisha. Dhanka kale, bambarka mashiinka tayada leh iyo qalabyada la xiriira ayaa loo heli karaa dadka isticmaala.
Warshadeena waxaa la aasaasay 2007 waxayna sameysay miisaan "3.13.30.300", yacni, 3 saldhig oo wax soo saar ah, waayo aragnimo 13-sano hodan ah, 30 injineero khabiir ah, 300 macaamiil daacad ah. Waxaa taageeray koox farsamo yaqaan xirfad sare leh oo ku takhasusay naqshadeynta bamka, noocyada iyo tijaabinta, DAMEI si dhakhso leh ayey u kortay sanadihii la soo dhaafay waxayna soo saartay qalab bambooyin tayo sare leh si loo qanciyo baahiyaha suuqa ee isbedelaya. Maaddaama badeecadeennu ay ka soo jiidanayso feejignaanta macaamiisha adduunka, waxaan bilaabaynaa inaan dhisno koox xirfadlayaal ah oo lataliye iib ah. Way ku fiican yihiin qiimeynta goobta iyo cilad bixinta, waxay kaa caawinayaan kormeerka qalabka, isku xirnaanta matoorrada iyo matoorrada, hawlgelinta nidaamyada bamgareynta.
Xafiiska ugu weyn ee shirkadeena wuxuu ku yaalaa magaalada Shijiazhuang, wuxuu daboolayaa meel sagxad ah oo dhan 750m2. Hadda, in ka badan 20 shaqaale xirfadlayaal ah ayaa ka shaqeynaya halkaas. Saddexda dhir ee aan dhisnay waxay kala yihiin siday u kala horreeyaan oo ku kala yaal Shijiazhuang (bamka slurry), Dalian (bamka kiimikada), Shenyang (API 610 Petro-pump), mid kasta oo ka mid ah oo soo saaraya bambooyin si adag u waafaqsan ISO9001, QA / QC standard, CE Mark , Calaamadaha IQNet iyo heerka kale ee warshadaha gudaha. Dhamaan sedexdaan dhir waxay kuqalabeysan yihiin aqoon isweydaarsiyo casri ah halkaas oo ay yaalaan qalab casri ah oo soosaarid, uruurin, tijaabin iyo dayactir ah Macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan iyaga ayaa hoos ku taxan:
1. Warshadda Shijiazhuang: sagxadda guud ee dhulka: 8000m2, aqoon isweydaarsiyo: 2200m2, shaqaalaha: 30;
Warshad 2.Dalian: dabaqa guud ee booska: 20000m2, aqoon isweydaarsiyo: 10000m2, shaqaalaha: 120;
Warshad 3.Shenyang: aqoon isweydaarsi: 1600m2, shaqaalaha: 30.
4. Wadarta: aqoon isweydaarsiyo: 13800m2, shaqaalaha: 180.
Tan iyo markii la aasaasay, shirkadeenu waxay u hogaansameysaa mabda'a bixinta noocyada hodanka ah ee bambooyin horumarsan. Iyada oo ku saleysan waayo-aragnimadeenna sannadeed ee R&D iyo soo saaridda bambooyin, waxaan soo saarnay noocyo badan oo bambooyin iyo qaybo ah, sida bambooyin ka sameysan maaddada hi-chrome iyo A09, Ti iyo bambooyinno isku-dhafan oo iskumid ah, bambooyin xumbo jiif ah, BB2 weyn bambooyin leh saldhig saliid iskeed ah (oo lagu qalabeeyay goos gooska Kingbury) iyo sidoo kale mashiinnada kaarboon silicon ee bambooyin VS4 Maaddaama kooxdeena R & D ay horumar ka sameeyeen dhowr dhibaatooyin farsamo oo khiyaano leh, waxaan hadda siin karnaa mashiinnada suuqa lagu rido oo ku raaxeysta awoodda ugu badan ee 1000kW iyo madaxa ugu sarreeya ee 1000m oo si habsami leh ugu shaqeeya heerkulka sarreeya ee 400 ° C. Bambooyin badan oo qeexitaanno waaweyn ah ayaa la soo saari doonaa mustaqbalka, iyagoo la kulmaya macaamiisha sii kordheysa ee looga baahan yahay qalabka bamgareynta.
Waad ku mahadsan tahay tayadooda wanaagsan, noocyada hodanka ah iyo sidoo kale waxqabadka aadka loo isku halleyn karo, badeecadeena waxaa loo dhoofiyay suuqyada shisheeye, sida Canada, US, UK, France, Australia, Czech, Poland, South-Africa, Argentina, Indonesia, Philippines , Kazakhstan, UAE, Pakistan iyo iwm Isla markaa, waxaan la samaynay xiriir iskaashi shirkado badan oo caalami ah sida Anglo American plc., Barrick Gold Corporation, BHP Billiton Ltd, Philex Mining Corporation, newmont africa mining Plc., KAZ Minerals, Kazzinc Group iyo India Aluminium macdanta iyo Fatima Fertilizer Company Limited iyo wixii la mid ah.
Sagaalkii sano ee la soo dhaafay ayaa markhaati ka ahaa dadaalkeenna weyn ee ku saabsan R&D iyo soo saaridda bambooyin iyo qaybo. Si kastaba ha noqotee, la'aanteed aaminaadahaaga iyo taageeradaada adag, weligeen ma heli doonno wixii aan helnay ama noqon mayno cidda aan nahay. Sidaa darteed, mustaqbalka soo socda, waxaan xaqiiqdii ku dadaalaynaa dadaal dheeri ah xagga horumarinta iyo soo saarista alaabooyin tayo sare leh waxaanan ku siin doonnaa tixgelinno iyo adeegyo u janjeedha macmiilka, annaga oo horay ugu sii soconayna wadadeena guusha ugu weyn.